बढ्दो भिडमा देखिन्छ आधुनिक दासप्रथा
मुख्य पृष्ठकन्टिर-दृष्टिबढ्दो भिडमा देखिन्छ आधुनिक दासप्रथा
कहिलेकाहीँ कन्टिर–बाबूलाई अचम्म लाग्छ र उनी मनमनै प्रश्न गर्छन्– आखिर नेपालको वास्तविक जनसङ्ख्या कति हो ? यस सवालको जबाफ जे हुनुपर्ने त्यो त्यो पाउन कठिन देख्छन् उनी ।
अरे यार जहाँ पनि भिडै–भिड । राजनीतिक सभा-जुलुसमा कहाँबाट त्यत्रा मानिस ओइरिन्छन् हौ ! चाहे त्यो झप्रमको भेला होस् चाहे केराको जुलुस होस् । चाहे शेबरापौको कुनै कार्यक्रम होस्, चाहे उराबामको वा कथाको आमसभा, जहाँ पनि ठूलै भिड देखिन्छ त … कस्तो अचम्म ?
कन्टिर–बाबूको मनमा जिज्ञासा उठ्छ– ती सबै कार्यक्रममा देखिने भिडका सहभागी फरक हुन्छन् कि उही अनुहार ? शनिबार, धनगढी, भरतपुर र विराटनगरमा देखिएको भिडमा अनुवाद भएका मानिसहरू त्यही ठाउँमा विगतमा विरोधी विचारकाले आयोजना गरेको घटनास्थलमा एकत्रित भिडका रमितेभन्दा फरक थिए कि उही थिए ? कन्टिर–बाबूसँग यस प्रश्नको जवाफ छैन, यहाँहरूसँग छ भने बताइदिनुहोला ।
कन्टिर–बाबूले सुनेका छन्, भिडमा अनुवाद भएपछि असल र खराब, मूर्ख र विद्वान मानिसबीचको फरक समाप्त हुन्छ । त्यस्तो बेलामा भिडले जे बोल्छ, जे हर्कत गर्छ, त्यो साझा हुन्छ । त्यसैले हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भनेका होलान् बूढाबूढीहरूले । यस्तो जान्दा–जान्दै पनि मानिस जुनसुकै बेला जस्तोसुकै भिडमा अनुवाद हुन तयार किन हुन्छन् ? यो कुरामा भने सम्झी–सम्झी कन्टिर–बाबूको दिमाग खराब भइरहेको छ ।
यसबाहेक कन्टिर–बाबूको मनमा यति बेला दुईवटा बुलबुला फुटिरहेको छ– पहिलो, मानिसलाई भिड बनाउने बिचौलिया, दलालको व्यापार अहिले दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बढेको छ । दोस्रो, आम मानिस साँच्चै बेरोजगार बनेका छन्, जो केही थान नोट, मासु–भात र दारुपानीका लागि जहाँ, जता पनि सजिलै ओसारपसार गरिन तयार हुन्छन् ।
यस्तोमा मानिसको संवेदनासँग खेलवाड गर्दै तिनलाई नाना प्रलोभन दिएर दूरदराजबाट टाढा–टाढासम्म ओसार्ने कुरा दासप्रथालाई पुनःस्थापित गराउने हर्कत होइन र ? कन्टिर–बाबू यो प्रश्नचाहिँ विघटित संसद् पुनःस्थापित भएमा, त्यही संसद्लाई सोध्नेवाला छन् ।
जनसङ्ख्या दासप्रथा भिडै–भिड